प्रहरीले नै तस्कर भगाए, चाँदीमा सुनको जलप लगाउन ५२ लाख खर्च ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/प्रहरीले नै तस्कर भगाए, चाँदीमा सुनको जलप लगाउन ५२ लाख खर्च !
प्रहरीले नै तस्कर भगाए, चाँदीमा सुनको जलप लगाउन ५२ लाख खर्च !
प्रहरीकै लापरबाहीले दुई मुख्य योजनाकार भाग्न सफल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। अपरेसन पूरा नहुँदै कनिष्ठ प्रहरीलाई विश्वास गर्दा दरबारमार्ग वृत्तका तत्कालीन डीएसपी दाहाल जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनु पर्‍यो। घटनास्थल परिवर्तन गरी नक्कली अपरेसनलाई जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले जस लिन खोजे। उपल्लो नेतृत्वले गल्ती ढाकछोप गर्दा फेरि प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा प्रश्न उब्जिएको छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।